China 5 in 1 ngwakọta okpomọkụ pịa igwe factory na-emepụta | Taile
Enwere ike iji igwe 5 na 1 kpoo ọkụ maka T-shirts, okpu, efere seramiiki, taịliki seramiiki, iko, ụsọ mmiri, jigsaw puzzles, leta, misc ndị ọzọ. akwa & ihe wdg. akpa, coasters, jigsaw egwuregwu mgbagwoju anya, leta, ndị ọzọ misc. akwa & ihe wdg O nwere ike nyefee yi foto na odide nke sublimating na etisasịwo ebi akwụkwọ ink jidesie ceramik, iko, na textiles dị ka owu, flax, chemical eriri, naịlọn, wdg nwekwara ike ịtọ kpọmkwem oge na okpomọkụ.
2.A pụrụ ịdabere na ya dị mma - Site na 12 "" x 15 "" nnukwu ọkụ ọkụ, mugs kpo oku akụkụ: 2.3 "" - 3.5 "" dayameta (11 oz); 8 sentimita asatọ efere kpo oku: 5 "" max dayameta; 10 sentimita asatọ efere kpo oku: 6 "" max dayameta; okpu kpo oku akụkụ: 6 "" x 3 "" (curved)
4.Precise dijitalụ akara - dijitalụ ikanam njikwa, na-abụghị osisi elu, na iche iche kwalite aluminum alloy isi, eji maka iko, okpu na kwushin ọcha; nke nwere oge dijitalụ dijitalụ na njikwa okpomọkụ, ịnwere ike ịhazigharị igwe ahụ dịka ihe dị iche iche Ntọala oge na ọnọdụ achọrọ. Mgbe oge a kara aka na ọnọdụ okpomọkụ ruru, mkpu na-ada ụda ga-ada ụda ma ihe mmewere ga-akwụsị ikpo ọkụ
Aha ngwaahịa ： 5 na 1 Combo Okpomọkụ Nyefee Press Machine
Agba ： Nwa
T-uwe akwa efere ： 12 "x 15"
Osote: 8 na 1 ngwakọta ọkụ pịa igwe
5 Na 1 Okpomọkụ Pịa
5 Na 1 Igwe Igwe Igwe Igwe
6 Na 1 Okpomọkụ Pịa
6 Na 1 Igwe Igwe Igwe Igwe
8 Na 1 Okpomọkụ Pịa
8 Na 1 Igwe Igwe Igwe Igwe